ဖြုဥ နုဖောင်းနေတဲ့ အသားရည်လေး နဲ့. ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့အသဲ ကို တဖြုတ်ဖြုတ် စေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း – Let Pan Daily
ဖြုဥ နုဖောင်းနေတဲ့ အသားရည်လေး နဲ့. ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့အသဲ ကို တဖြုတ်ဖြုတ် စေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
ပိုစ့်ဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်တတ် လို့ ဖေ့စ်ဘုတ် ပရိသတ်တွေကြား မှာ ရေပန်းစားလာတဲ့ ဆယ်လီ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ကတော့ ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့အပြင် ညို့အားပြင်းတဲ့အလှကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုတိုမော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေကို ပြုလုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း နဲ့ပုရိသတွေရင်ကိုလှုပ်ခါ သွားစေနိုင်တဲ့ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်နွယ်နွယ်ထွန်းကိုပရိတ်သတ်ကြီးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ ဆွဲဆောင်မှုပြင်းလှတဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို social network တွင် မကြာခဏတင်ပေးလေ့ရှိပြီး ပရိတ်သတ် အားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူ တစ်ဦးပါ။ နွယ်နွယ်ထွန်းဟာ လတ်တလောတွင်ခရီးတွေဆက် တိုက်ဆိုသလိုသွားနေတာဖြစ်ပြီး အမိုက်စားရှုခင်းလေးတွေနဲ့ဓာတ်ဖမ်းနေတာပါနော်။ နွယ်နွယ်ထွန်းဟာ မကြာသေးမီကသူမရဲ့facebookစာမျက်နှာတွင် “လွမ်းတယ်ဆို…..”ဆိုတဲ့captionလေးနဲ့ပုံလေးတွေ တင်ပေးလာပါတယ်။
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ကတော့ ပျော်နေတဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေကို အမိုက်စားပို့စ်တွေနဲ့တင်လာတာပါနော်။ သူမဟာ အနီရောင်အင်္ကျီလေးနဲ့ ဖြူဖွေးဥနေတဲ့အတွင်းသားလေးတွေကိုလှစ်ဟထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နွယ်နွယ်ထွန်းဟာ လတ်တလောတွင်ပွဲ အခမ်းအနားများ တက်ရောက်နေပြီး မဂ္ဂဇင်းကာဗာများလည်း ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော ရစ်ရစ်လေးကိုအားပေးကြမယ်မလား။ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပရိတ်သတ်တွေအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဖွုဥ နုဖောငျးနတေဲ့ အသားရညျလေး နဲ့. ခန်ဓာကိုယျအလှတှကွေောငျ့ ပုရိသတှေ ရဲ့အသဲ ကို တဖွုတျဖွုတျ စတေဲ့ နှယျနှယျထှနျး
ပိုဈ့ဆနျးဆနျးလေးတှနေဲ့ ဓါတျပုံတှေ ရိုကျတတျ လို့ ဖစျေ့ဘုတျ ပရိသတျတှကွေား မှာ ရပေနျးစားလာတဲ့ ဆယျလီ တဈယောကျဖွဈတဲ့ နှယျနှယျထှနျး ကတော့ ခဈြစရာလညျးကောငျးတဲ့အပွငျ ညို့အားပွငျးတဲ့အလှကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ ပုရိသတှရေဲ့အားပေးဝနျးရံမှုကို ရရှိထားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
ဖိုတိုမျောဒယျတဈယောကျအဖွဈ အနုပညာ လှုပျရှားမှု တှကေို ပွုလုပျနတော ဖွဈပါတယျ။ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျး နဲ့ပုရိသတှရေငျကိုလှုပျခါ သှားစနေိုငျတဲ့ မျောဒယျသရုပျဆောငျနှယျနှယျထှနျးကိုပရိတျသတျကွီးသိကွမယျထငျပါတယျနျော။ သူမဟာ ဆှဲဆောငျမှုပွငျးလှတဲ့အမိုကျစားပုံရိပျတှကေို social network တှငျ မကွာခဏတငျပေးလရှေိ့ပွီး ပရိတျသတျ အားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူ တဈဦးပါ။ နှယျနှယျထှနျးဟာ လတျတလောတှငျခရီးတှဆေကျ တိုကျဆိုသလိုသှားနတောဖွဈပွီး အမိုကျစားရှုခငျးလေးတှနေဲ့ဓာတျဖမျးနတောပါနျော။ နှယျနှယျထှနျးဟာ မကွာသေးမီကသူမရဲ့facebookစာမကျြနှာတှငျ “လှမျးတယျဆို…..”ဆိုတဲ့captionလေးနဲ့ပုံလေးတှေ တငျပေးလာပါတယျ။
အမြိုးသားထုကွီးရဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ နှယျနှယျထှနျး ကတော့ ပြျောနတေဲ့ အလနျးစားပုံလေးတှကေို အမိုကျစားပို့ဈတှနေဲ့တငျလာတာပါနျော။ သူမဟာ အနီရောငျအင်ျကြီလေးနဲ့ ဖွူဖှေးဥနတေဲ့အတှငျးသားလေးတှကေိုလှဈဟထားတာဖွဈပါတယျ။ နှယျနှယျထှနျးဟာ လတျတလောတှငျပှဲ အခမျးအနားမြား တကျရောကျနပွေီး မဂ်ဂဇငျးကာဗာမြားလညျး ရိုကျကူးနတောဖွဈပါတယျ။ ပရိတျသတျကွီးရော ရဈရဈလေးကိုအားပေးကွမယျမလား။ ဆှဲဆောငျမှုရှိလှတဲ့ နှယျနှယျထှနျးရဲ့ပုံရိပျတှကေိုပရိတျသတျတှအေတှကျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ ညှို့အားပွငျးအလှတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး တဈနတေ့ခွား လှရကျလှနျးနတေဲ့ “ခငျသဇငျ”
ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးတွေ အများကြီးကို သယ်ပိုးထားရပြီး နေမကောင်း တာတောင် ဆေးရုံ မတက်ရတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ အကြောင်းြေ ပြာ ပလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ချစ်သူ